HTC 10 anaghị emezu ihe a tụrụ anya ya na ahịa wee tụọ ya nke ọma | Androidsis
Ahịa nke HTC 10 anaghị enweta atụmanya nke ụlọ ọrụ Taiwanese kwalitere
Manuel Ramirez | | HTC, Noticias
Taa bụ ụbọchị nkụda mmụọ maka ụfọdụ ndị nrụpụta nke nwara ibupute ngwaọrụ dị elu n'ahịa iji dọta uche ọtụtụ nde ndị ọrụ na-achọ ọdụ nwere ihuenyo ka mma, karịa RAM na foto ka mma. Anyị ekwuola maka dochie ụfọdụ nke ndị isi LG na mgbe ha emezughị atụmanya ahịa, ha abanyela n'ahịrị iku ume. G5 nke bụ nnukwu ekwentị, nke m merela nyocha ngwaahịa, mana LG n'onwe ya tụrụ anya ire ihe karịrị nke o mere.
Ugbu a, anyị na -agakwuru HTC na, n'agbanyeghị na ọ nwere Nexus ọhụrụ abụọ ọ fọrọ nke nta ka ọ rute n'ahịa, ọ dị ka enweghị ike ha nwere ike gosipụta ngwaahịa ga -ere nde nde. Agbanyeghị, ọ bụ ihe siri ike mgbe afọ abụọ a gara aga gara na ndabere. Ma ọ bụ na ire nke HTC 10 na -ewute onwe ha nke ukwuu na ọ fọrọ nke nta ka ha kwuo maka nkụda mmụọ miri emi nke onye nrụpụta Taiwanese belụsọ na nhọrọ ya nwere ike chekwaa ya. eziokwu mebere ya na Vive ya.
Ọnụ ọgụgụ ziri ezi iji tinye a oké ịda mbà n'obi bụ na HTC abịa ikesa nde nde 1 n'afọ a dị ka mkpokọta ahịa, dị ka akụkọ TrendForce si kwuo. Ekwentị nwere oke mmasị na ihe mejupụtara ya na mbụ, mana mgbe ị matara ọnụ ahịa ya, n'otu ịdị elu dị ka Galaxy S7, ekwentị kacha mma nke afọ a, enwere gị ihu ihu.
Mwepu zuru oke ịghara iwetulata ọnụahịa ka ọ dịkarịa ala onye ọ bụla nwere ike iche maka ya. Ị nweghị ike ịnọ n'oche azụ ruo afọ abụọ, mgbe ahụ nwaa ịgbaso otu profaịlụ na ọnụ ahịa; ị ga -enye ihe ọzọ iji dọta uche.
Ugbu a ọ nwere naanị ya olile anya ekwentị Nexus ndị ahụ que ga -abata na ngwụcha oge ọkọchị. Debe mkpịsị aka gị ...
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » HTC » Ahịa nke HTC 10 anaghị enweta atụmanya nke ụlọ ọrụ Taiwanese kwalitere
Etu esi emeghe mmeghe taabụ Chrome na mmegharị ọsọ ọsọ
A kọrọ na HTC rere 100.000 Vive virtual reality devices